Ukukhetha umdlalo womntwana wakho kufuneka ucingisise ngokungathandabuzekiyo. Iyakuchukumisa impilo yakhe yengqondo, ngoko kungcono ukusebenzisa ixesha elide. Iingcali zengqondo zithi ukuba nombala wezatho zithintela umntwana, kwaye sele sele ingxaki ebalulekileyo efuna ingqalelo.
Unjani uhlobo lokudlala olufunwa ngumntwana? Ngokuqinisekileyo, ukhanyisa. Unomtsalane, ngoko ke uyayithatha. Nangona kunjalo, akusoloko kulungile. Ngamanye amaxesha kufuneka ucinge ngezinye iindlela, kuba imibala nganye inefuthe elibi kwi-psyche, echaphazela kakhulu ukuziphatha nokuziphatha kwangomntu.
Umbala obomvu uthintela umntwana ngendlela ekhohlakeleyo. Le nxalenye yesikali esicasula umntu, ngoko kungcono ukuyikhuphela. Ngakolunye uhlangothi, abantwana bathanda umbala wezathoyilo, uqaqambile kwaye unomdla, kwaye ngakwelinye icala kungakhokelela ekuthungeni. Abavelisi banikela ngeendlela ezikhethiweyo, kodwa nantsi imodeli enye yeetoni ayiqhelekanga. Ngenxa yoko, umbala obomvu awunakunyamalala ebomini bomntwana.
Enyanisweni, yonke imibala yobuncwane kufuneka ihambisane nomntwana omncinci. Iimfino zichaphazela umntwana ngaphezu kwanoma yini enye ebomini, ngoko kufuneka ukhumbule ngokudibanisa okuthakazelisayo. Ngokomzekelo, umbala obomvu okanye obomvu uya kuba yinto engaphezulu ebomvu. Uya kususa umphumo onobungozi, okwenza umdlalo ungathandeki kuphela, kodwa uncedo.
Umbala obomvu weetekethi uyathinta umntwana kungekhona kwicala elifanelekileyo. Ekuqaleni uba yinto engcono kakhulu, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, abazali bayaqaphela ukuhlukana komntwana. Ngokuqinisekileyo, oku kunokwenzeka kuphela xa ubudlelwane obungathandekiyo nabantu abasondeleyo bechaphazelekayo, kodwa imiphumo ibe yinto engathandekiyo.
Umbala obomvu okombala ungcono ukuba ungayisebenzisi nakwikamelo labantwana, njengoko lukhokelela umntu ekuphelelweni. Kwakhona, inokuthi "ihlanjululwe" ngamathoni afudumele, kwaye olunye uhlobo lwezathoyilo aluyi kusebenza. Enyanisweni, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba oku kusebenza kuphela kubhakabhaka oluqaqambileyo, kuba i-blue tint yinto ekhethekileyo kuyo yonke inkwenkwe. Kunceda ukuphumla nokuphonsa kwizinto ezijabulisayo zomdlalo.
Imibala eluhlaza kunye eluhlaza
Kwakhona kufuneka uhlawule imibala eluhlaza kunye nohlaza. Iimidlalo zezingane zinefuthe elihle kwimvakalelo yomntwana. Lawa amathoni afudumeleyo, ayenabantu abadala ngokuqhelekileyo babe yinto ekhethekileyo. Ukuthabatha amathoyizi alo mbala, unako ukushiya abantwana bodwa, ngokuqinisekileyo kuba abayi kukhwankqiswa yiyo.
Ngokomxholo, umbala ophuzi kunye nohlaza - ukhetho olufanelekileyo lwabazali. Akukho miphumo eyingozi, kwaye iimvakalelo ezifudumeleyo ziya kushiya iimvakalelo zothando emphefumlweni womntwana. Nangona abambalwa abavelisi baxuba le mibala emibini kwiimodeli zokudlala. Isiphumo asiqineki, ngoko asikwazi ukutsala abathengi ngendlela engcono.
Umbala weetekisi unokuchaphazela isimo sengqondo somntwana. Nangona kunjalo, musa ukulibala malunga neendlela ezininzi, ezidweliswe kwiintlobo ezahlukeneyo. Batsala ingqalelo ebantwini, bephendukela kuba ngabazali abahle. Kwaye oko kuhlale kuthenga oku kulungile, kuba impembelelo emihle okanye emibi ibonakala kuphela ngombala omnye.
Ngaloo ndlela, xa uthengisa amathoyizi kumntwana wakho, kufuneka unake umbala. Kungcono ukhethe imodeli, apho iifani ezihlukeneyo zixutyushwa khona, ukwenzela ukuba umkholise umntwana. Nangona asimele sikhohlwe ukuba ngamnye umntwana ubheka ukuzonwabisa ngokuhlukileyo. Ngamanye amaxesha akadingi amathoyizi aqaqambileyo, njengoko eguqula ngokuzithandela kwiincwadi, ngoko kufuneka ukhumbule iimfuno zomntwana kunye neemfuno zakhe.
Uphuhliso lwengqondo lomntwana omncinane
Ukuphuhliswa kwamakhono kubantwana abane-autism
Indlela yokufumana "igolide yokuthetha" ekukhuliseni umntwana?
Ukhohliwe imidlalo yaseRashiya yabantwana abancinci
Imali yomntwana kumabakala amahle
Iziphephelo zaseTibetan zolutsha nobuhle
Indlela yokulungiselela i-USE ngaphandle kweengxaki zomzimba
Iibisiki zaseBelgium "I-Speculaas"
Impawu zobunwele bebala ekhaya
Into ebhetele kakhulu kwihlabathi yimeko yedwa